ကလေးသူငယ်တွေဟာ ဘယ်အခြေအနေမှာ အထီးကျန် ခံစားလာရသလဲ? – BurmeseHearts
ကလေးဆိုတာ စိတ်ရှိသလောက် ကိုယ်ပိုင် လုပ်ကိုင်ဆုံးဖြတ်ခွင့် မရှိကြဘူး။ သူတို့ဆန္ဒရှိတဲ့အရာကို လူကြီးက အလိုက်တသိ မဖြည့်ဆည်းပေးဘူးဆိုရင် ဒီစိတ်ဖိစီးမှုကြီးက ပိုတိုးလာပြီ။ လူကြီးတွေက သူတို့ကို အရေးတယူ ဂရုစိုက်မှုမရှိဘူး ၊ သူတို့ဆန္ဒတွေ လျစ်လျူရှုထားမယ် ၊ သူတို့တတွေကို လျစ်လျူရှုထားမယ်ဆိုရင် လျစ်လျူရှုခံထားရတဲ့ သူတို့ဘဝမှာ အထီးကျန်ခံစားမှုဆိုတာတွေ ခံစားလာရပါပြီ။
မိခင်နို့ချိုတိုက်ကျွေးခြင်းဖြင့် မိခင်အတွက် ရရှိသော အကျိုးအာနိသင်တွေဟာ ဘာလဲ?
BurmeseHearts	 Jul 15, 2015 0